Isiphi isongo esihlakaniphile ongasithenga ngoKhisimusi | Izindaba zamagajethi
Yisiphi isongo esihle ongasithenga ukunikeza ngoKhisimusi
UKhisimusi uyeza. Uma ucabanga ukuthi isikhathi sesifikile yeka ukuphana ngamasokisi, othayi, izithambiso zokugqoka nezingubo zangaphansi Ngokuvamile, lokho abahlale besinikeza khona futhi esikunikeza khona ngalesi sikhathi sonyaka, isongo lokulinganisa lingahle libe yindlela enhle ongayicabangela.
Okokuqala, kufanele sicaciswe ngomehluko phakathi kwesongo sokulinganisa ne-smartwatch. Ngenkathi amabhande ezihlakala zomsebenzi eklanyelwe ukuqapha umsebenzi wethu wansuku zonke ngaso sonke isikhathi ngaphandle kokuzenzisa, yize kukhona amamodeli aphelele impela, ama-smartwatches enza okufanayo kodwa ngezici eziningi, isikrini esiningi nentengo ephezulu.
Isikrini esikhudlwana se-smartwatches sikuvumela ukuthi usebenzise izinhlelo ezithile kudivayisi uqobo ngaphezu kokuphendula izingcingo nemiyalezo evela kuzinhlelo zokusebenza zemiyalezo ezisetshenzisiwe. Ngaphezu kwalokho, faka i-GPS ngakho-ke basivumela ukuthi silandelele umsebenzi wethu wezemidlalo ongaphandle.
Omunye umkhawulo wama-smartwatches yi impilo yebhethri, ezimeni eziningi ezingeqi emahoreni angama-24. Lokhu kungenxa yokuthi ngakolunye uhlangothi, izikrini zamadivayisi amaningi zihlanganisa isikrini se-OLED lapho kungakhonjiswa khona noma yiluphi uhlobo lwezithombe, imibhalo emide nokunye. Esinye isizathu ukusetshenziswa okuqhubekayo kwe-GPS.
Ukuqeda ukuqhathanisa ukuze ucace futhi uhlukanise ngokushesha phakathi kwamasongo wokulinganisa ne-smartwatch, kufanele sibheke intengo. Ngenkathi amasongo alinganisa umsebenzi wethu wezemidlalo singawathola kusuka kuma-euro angama-30, ama-smartwatches amahle (hhayi ama-knockoffs amaShayina) aqala kahle kusuka kuma-euro angama-100.
2 Hlonipha i-Band 5
3 I-Samsung Galaxy Fit e
4 I-Fitbit Inspire HR
5 UGarmin Vivosport
Yize kuyisibonelo eyaziwa kakhulu emakethe, Ngithathe isinqumo sokuyibeka endaweni yokuqala ngoba sizoyithatha njengesethenjwa maqondana nawo wonke amamodeli esizowancoma kule ndatshana.
Isizukulwane sesine se- I-Band Yami 4 ekugcineni thola i- ukubonisa umbala nezinwele ezinkulu kunezangaphambili, ikakhulukazi amasentimitha angu-0,95. Kusivumela ukuthi sithole izaziso zombili imilayezo nezingcingo esizitholayo, kepha ngokungayihlanganisi imakrofoni, asikwazi ukuphendula izingcingo noma imiyalezo.
Ngokusho komkhiqizi, ibhethri leMi Band 4 lifinyelela ezinsukwini ezingama-20, noma kunjalo empeleni ingeqi amaviki ama-2. Ayinayo i-chip ye-GPS, into ejwayelekile ekulinganiseni amasongo ngenxa yentengo yayo nebhethri eliyidingayo.
Akugcini nje ngokuqapha ukusebenza kwethu kwansuku zonke njengebanga esilihambile, izinyathelo, amakhalori esiwashisile ... kodwa futhi qapha ukushaya kwenhliziyo yethu ngesicelo somsebenzisi hhayi ngokuzenzakalela njengokungathi ezinye izinto zokukwenza.
Yonke idatha ibhalwe kuhlelo lokusebenza lwe-Mi Fit, uhlelo lokusebenza oluhambisana nakho kokubili i-iOS ne-Android. Ukulahlwa kwe Ukunikwa isitifiketi kwe-IP68 futhi kungafinyelela kumamitha angama-50.
Imodeli esingayithola eYurophu naseLatin America iyona imodeli ngaphandle kwe-NFC chip ngakho-ke asikwazi ukuyisebenzisa ukukhokha ngesongo lethu.
IXiaomi Mi Band 4 inentengo ku-Amazon ye I-32,99 euro.
Hlonipha i-Band 5
Inketho yesibili engcono kakhulu esinayo emakethe ivela esandleni seHauwei nge Hlonipha i-Band 5. Le bracelet ishibhile kancane kuneXiaomi Mi Band 4 futhi isinikeza cishe izinzuzo ezifanayo, kufaka phakathi isikrini se-OLED esingu-0,95-intshi.
Kodwa-ke, sithola umehluko obalulekile ongadlala ngawe futhi umelane nawe, njengokuzimela okuyizinsuku ezi-4 kuye kwezi-5 kanye isilinganiso se-oxygen oxygen, isici esanikezwa ngama-smartphones aphezulu aseSamsung eminyakeni embalwa eyedlule, kepha asanyamalala.
NjengeMi Band 4, ayinayo i-chip ye-GPS, ngakho-ke sidinga i-smartphone yethu ukulandelela umzila wethu ngaphandle lapho sihamba, ukugibela ibhayisikili noma ukuhamba nje. Futhi ayisivumeli ukuthi sikhokhe nge-NFC ngoba ayinayo le chip.
IHonor Band 5 iyatholakala nge I-32,99 euro ku-Amazon.
I-Samsung Galaxy Fit e
AbakwaSamsung bangene emakethe yokulinganisa amabhande esihlakala ngokusebenzisa i- I-Galaxy Fit e, isongo nge isikrini esimnyama nesimhlophe. Le modeli isivumela ukuthi silinganise ngokuzenzakalela yonke imisebenzi yethu yezemidlalo kufaka phakathi ukushaya kwenhliziyo, izinyathelo, imijikelezo yokulala ...
Inzuzo yayo enkulu ngaphezu kwazo zonke izinhlobo zeXiaomi neHonor ukuthi iyamelana nothuli, amanzi nokwethuka. ngokwezindinganiso zempi. Ayinayo i-GPS chip yokulandela ngomkhondo umsebenzi wethu womzimba noma i-NFC.
Ibhethri lifinyelela ezinsukwini ezingama-4-5 zokuzimela kanye nolwazi okubhaliswa yile divayisi kungatholakala kuhlelo lokusebenza lwe-Samsung Health, enye yezicelo ezinhle kakhulu ngemvume evela kuGarmin.
I-Samsung Galaxy Fit 3 inentengo ngo- Ama-euro angama-29 e-Amazon.
I-Fitbit Inspire HR
UFitbit ungomunye wamakadebona emhlabeni wokulinganisa amasongo. Yize kuliqiniso ukuthi awashibhile ncamashi, ikhwalithi yezinto zokwakha nolwazi esinikezwa lona Ngeke siyithole kuzo zombili izinhlobo zeXiaomi neHonor.
La I-Fitbit Inspire HR isinikeza ukuzimela kwezinsuku ezi-5 ezigcwele, Ihlola ngezikhathi ezithile ukushaya kwenhliziyo njengezinyathelo, ibanga elihanjiwe, imizuzu yokusebenza. Iyakwazi ukuthola ngokuzenzakalela uhlobo lwezemidlalo esikwenzayo ukulubheka.
Ayinayo i-chip ye-GPS, ngakho-ke ayikwazi ukuqapha ukuzivocavoca ngaphandle ngaphandle kokusebenzisa i-smartphone yethu. NjengeMi Band 4, isinikeza izinketho ezihlukile zokwenza ngokwezifiso lapho usebenzisa imichilo ehlukahlukene enombala.
I-Fitbit Inspire HR ibiza ngentengo Ama-euro angama-79,90 e-Amazon
IGarmin ifana nekhwalithi nokuqina lapho kukhulunywa ngamadivayisi wokulinganisa. I- UGamin Vivosport ngenye yamasongo ambalwa wokulinganisa lokho ine-chip ye-GPS ukulandelela ukuzivocavoca kwethu ngaphandle, ngakho-ke kuhle kubathandi bezemidlalo, ngoba akudingekile ukuphuma neselula.
I-chip ye-GPS iphethe ukurekhoda womabili umzila lapho ikhipha khona ibanga elihanjiwe kanye nesivinini esimaphakathi ngohlelo lokusebenza oluhle olunikeza thina, enye yezinto ezinhle kakhulu emakethe.
Njengesongo esihle sokulinganisa, futhi sikwazisa ngamakhalori esishisayo, siqaphele ukulala kwethu futhi sisinikeza nemininingwane inani le-oxygen egazini.
IGarmin Vivosport ibiza ngentengo Ama-euro angama-101,99 e-Amazon
Indlela ephelele ye-athikili: Izindaba zamagajethi » Gadgets » Amadivayisi agqokekayo » Yisiphi isongo esihle ongasithenga ukunikeza ngoKhisimusi
I-Amazon Echo 3rd Generation, Sibuyekeza i-Big New Echo
Izipikha ezihlakaniphile ukunikeza ngoKhisimusi